सिजन ३ को फाइनल आज: को बन्ला नेपाल आइडल ? – Rapti Khabar
सिजन ३ को फाइनल आज: को बन्ला नेपाल आइडल ?
अजवी पौड्याल/अन्नपुर्ण पोष्ट
भदौ १२, काठमाडौँ । देशले आज तेस्रो नेपाल आइडल प्राप्त गर्दैछ । शुक्रबार स्टुडियोमा आयोजना हुने गायन रियालिलिटी सो ‘नेपाल आइडल–३’ को ग्रान्ड फिनालेमा यसको विजेता घोषणा गरिने छ ।
विभिन्न इलिमिनेसन राउन्ड पार गर्दै उत्कृष्ट ३ मा पुगेकामध्येबाट तेस्रो नेपाल आइडल घोषणा हुन लागेको हो । एपी वान एचडीबाट हरेक हप्ता बिहीबार र शुक्रबार प्रसारण हुँदै आएको यो रियालिटी सो नेपाली सांगीतिक इतिहासको सर्वाधिक रुचाइएको कार्यक्रम हो । प्रतिस्पर्धाको उत्कृष्ट ३ मा सज्जा चौलागाईं, प्रवीण बेडुवाल र किरणकुमार भुजेल पुगेका छन् ।
हजारौंबाट छानिएर उत्कृष्ट ३ मा पर्न सफल भएका उनीहरूले पाएको भोटको आधारमा विजेता चयन हुनेछ । विजेताले ‘नेपाल आइडल–३ को उपाधिसहित ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ ।
यसैगरी फस्ट रनरअपले १५ लाख र सेकेन्ड रनरअपले पाँच लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् । अन्य हप्ताको कार्यक्रम जस्तै शुक्रबारको कार्यक्रममा सीमित मानिस र दर्शकको उपस्थितिमा नेपाल आइडल–३ को विजेता घोषणा गरिने प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार कोभिड—१९ का कारण ग्रान्ड फिनाले सामान्य तवरमै सञ्चालन गर्न लागिएको हो । लकडाउन भएको थिएन भने गत चैतमै कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्थ्यो । कोरोनाका कारण रोकिएको कार्यक्रम करिब तीन साताअघि पुनः सुरु भएको थियो । कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा इन्दिरा जोशी, न्ह्युु वज्राचार्य र कालीप्रसाद बाँस्कोटा रहेका छन् ।
उनी भारतको तमिलनाडुमा हुर्किएका हुन् । इन्डियन आर्मीमा आबद्ध उनका बुवाले गायनका लागि उनलाई कहिल्यै सहयोग गरेनन् । उनका बुवाले प्रवीण पनि आर्मीमै जागिर खाओस् भन्ने सोच्थे । बुवाले भनेपछि कसैले पनि नाइँ भन्न सक्दैनथे । प्रवीण गाउन नछाड्ने, उनका बुवाले गीत गाएको सुन्न नसक्ने ।
बुवाले एक दिन प्रवीण सामु एउटा प्रस्ताव राखे । ‘प्रवीण कि गाउन छाडिदे कि घर ? प्रवीणले घर नै छाडिदिए । त्यसपछि हजुरआमासँग बसे । उनका हजुरबुवा सानोमै भारत पसेका थिए । उतै व्यापार गरे । छोराछोरी उतै हुर्काए । तर पनि उनलाई भनिरहन्थे, ‘यो हाम्रो ठाउँ होइन है । नेपालमै फर्कनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ ।’ नेपालमै सरकारी जागिर खानुपर्छ भन्ने सोच थियो । हजुरबुवा आफ्नै देशमा काम गर्न उक्साउँथे । यसैले पनि प्रवीणमा नेपालमै केही गनुपर्छ भन्ने भावना जागेको थियो ।
नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिसन चलिरहेको थियो । बुटवल अडिसन हुँदा उनी चितवनमा थिए । नेपाली गीतसंगीत सुनेर हुर्किएका प्रवीण नेपाली भाषाका गीत पनि उत्तिकै राम्रो गाउँथे । उनका नेपाली साथीले नेपाल आइडलमा जाने सल्लाह दिए । उनी पहिलो टेकमै छनोट भए ।
काँचो फलफूल बजारमा लग्यो भने कसैले किन्दैन भन्ने विचार राख्ने प्रवीण परिपक्व बनेर मात्रै संगीतमा आउनपर्छ भन्ने सोच राख्थे । यसैले पनि निकै मेहनत गरिरहेका छन् । त्यसैले त उनका हरेक प्रस्तुति अब्बल हुने गर्छन् । उनलाई जित्नैै पर्छ भन्ने लाग्दैन । नेपाल आइडल एउटा उचित प्लेटफर्म भएकाले यहाँसम्म पुग्नु नै आफ्ना लागि विशेष उपलब्धि भएको ठान्छन् उनी ।
उनीभित्रको गायन क्षमताले उडानको सपना देखिरहेको थियो । उनी संगीत सिक्न काठमाडौंको ललितकलामा भर्ना भए । अनि मात्रै सुरु भयो उनको सांगीतिक संघर्ष ।
काठमाडौं, भदौ २३ चीन र भारतका सै’निकबीच फेरि भिड’न्तको खतरा बढेको छ। सोमबार सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा दुई देशका सै’निकबीच दो’होरो फाय’रिङ भएको हो। दुवै देशका सै’निकले एकअर्कालाई पहिले फा’यरिङ गरेको आरोप लगाएका छन्। चिनियाँ सैनि’कले भारतीय सै’निकले पहिले वास्तविक सीमा रेखा पार गर्दै ध’म्की स्व’रूप फाय’रिङ गरेको आरोप लगाएको छ। चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल […]
दसैं मान्न घर आएका युवामा कोरोना पुष्टि, पाँच दिनका लागि गाउँ ‘सिल’
कात्तिक ११, बागलुङ : जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका ३ धम्जा पाँच दिनका लागि सिल गरिएको छ । दसैं मनाउन घर आएका एक युवामा दसैंकै दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँ नै सिल गरिएको वडा सदस्य खुम भण्डारीले जानकारी दिए । क्षयरोग परीक्षण केन्द्रको प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा सोमबार भारतबाट आएका युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो […]
कोरोना संक्रमित किन हुन्छन सम्पर्कविहिन ? यस्तो छ अचम्मको भित्री कारण